Umoya weBuffalo eLake Wabaunsee - eFlint Hills - I-Airbnb
Umoya weBuffalo eLake Wabaunsee - eFlint Hills
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguSara
Indlu yethu yamaplanga enamaphupha ineveranda enkulu yangaphambili kunye neebhalikhoni ezimbini zabucala ezijonge iFlint Hills entle yaseKansas. Sebenzisa ibhodi yethu yokutyibiliza emanzini, i-kayak, okanye utsibele kwindawo yethu yabucala eLake Wabaunsee xa kushushu. Xa kubanda, yonwabela iindawo zethu zokubasa umlilo, imidlalo yebhodi, ii-cookie zokubhaka ekhitshini lethu, okanye wenze iiphazili. Igumbi lethu lokulala elihle linophahla olugqamileyo kwaye lilungele iholide epholileyo nekucingisa ngothando okanye ukuphumla nentsapho.
Ikhaya lethu yindlu yamaplanga entsha ehonjiswe ngendlela yakudala esithemba ukuba uza kuyonwabela njengathi.
Kukho ii-balcony ezimbini zabucala ngasemva kwekhaya kunye neveranda enkulu yangaphambili. Ukongezelela, iveranda ezimbini zelanga zibonisa umva wekhaya. Ebusika ungashiya iminyango ivulekile kwezi varanda uze ushushule indlu yonke.
Kwigumbi losapho uza kufumana ifenitshala etofotofo, indawo yokubasa umlilo ye-propane, kunye neTV enesidlali se-DVD. Zombini iTV zasekhaya zixhotyiswe ngesixhobo seChromecast, esikuvumela ukuba usasaze iimuvi ngefowuni, ngethabhlethi okanye nge-laptop yakho.
Le ndlu ayihlali ngqo echibini, kodwa idokhi yethu yabucala ifumaneka ngqo ngaphaya kwendlela yokungena esuka endlini. Kwidokisi, uza kukwazi ukusebenzisa izinto zokudlala zasechibini, uphumle ngoxa uloba, okanye wonwabele ingokuhlwa ethe cwaka uhamba ngeenyawo zakho emanzini.
Kukho imbonakalo evulekileyo nengenabungozi yeFlint Hills ukusuka kwiibhalkoni ezingasemva, elungele ukuqalisa usuku lwakho ngokuphuma kwelanga kunye nekomityi yekofu okanye ukonwabela ukutshona kwelanga kunye nekomityi yeti okanye iglasi yewayini.
Siyathemba ukuba uziva usekhaya kule ndawo!
4.83 · Izimvo eziyi-206
Imeko eLake Wabaunsee ipholile kwaye ilungele ukuphumla. Ngoxa ulapho, ungahamba ngeenyawo, ngebhayisekile, ngephenyane, ngephenyane, ukuqubha, okanye udlale echibini ngesikhephe sakho okanye i-jet ski. Kukho nebala legalufu elikufutshane elinemingxuma elilithoba elinokusetyenziswa ziindwendwe ngemali encinci eyongezelelekileyo.
Siza kuzama konke okusemandleni ethu ukuphendula yonke imibuzo enento yokwenza nokuhlala kwakho nge-imeyile okanye ngomyalezo. Nceda ungonqeni ukuqhakamshelana nathi!